माइतीघर-तीनकुनेमा कालोपत्रे गरी साइकल मात्र चल्ने लेन बनाइने :: Setopati
माइतीघर-तीनकुनेमा कालोपत्रे गरी साइकल मात्र चल्ने लेन बनाइने भाडामा साइकल चलाउने योजना बनाउँदै महानगर
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, मंसिर २६
दुई साताअघि ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नो पहिलो साइकल लेन उद्घाटन गर्‍यो। ललितपुर मेयर चिरीबाबु महर्जनले कुपण्डोलदेखि पुल्चोकसम्म साइकल लेन उद्घाटन गर्दै थप लेन विस्तार गरिने बताएका थिए।
नभन्दै त्यो बेला एकतर्फी मात्र बनेको साइकल लेन बिहीबार दुईतर्फी नै बनिसकेको छ। महानगरले यो लेन गोदावारीसम्म विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।
ललितपुरको यो कदमको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेका बेला काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि साइकल लेनको सार्वजनिक गरेको छ।
मंगलबार महानगरले अन्त्रक्रिया कार्यक्रम गरी माइतीघर-तीनकुने साइकल लेनबारे छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा महानगरीय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत, साइकल अभियन्ताहरू, सहरीविद्हरू र सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा काठमाडौंलाई साइकल सहर बनाउनुपर्ने र छुट्टै लेन आवश्यक रहेको विषयमा छलफल भएको थियो।
यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै महानगरले माइतीघर-तीनकुनेमा दुवैतर्फ ५ किलोमिटर साइकल लेनको गुरू योजनामा काम गरिरहेको बस्नेतले जानकारी दिए।
साइकलयात्री सुविधाका लागि सुरक्षित लेन अनिवार्य भइसकेको बताउँदै बस्नेतले भने, 'साइकल लेनको आवश्यकता नकार्न सकिँदैन। साथै सुविधायुक्त र सुरक्षित हुन पनि जरुरी छ।'
उसो त यो खण्डको साइकल लेन नयाँ बनाउन लागिएको होइन। यहाँ पहिले नै साइकलका लागि भनेर बेग्लै लेन बनाइएको छ। तर यसको उपयोग राम्ररी हुन सकेको छैन। संरचनागत कठिनाइ र अरू बाधाका कारण यहाँ ढुक्क भएर साइकल चलाउने वातावरण थिएन।
'अब यही साइकल लेनलाई स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित बनाउन लागिएको हो,' बस्नेतले भने।
तस्बिरः समिक्षा अधिकारी
व्यवस्थित भनेको के?
संसारमा दुई किसिमका साइकल लेन प्रयोगमा छन्। पहिलो 'डेडिकेटेड' जहाँ साइकल मात्रै गुडाउन पाइन्छ।
दोश्रो 'सेयर्ड', जहाँ अन्य सवारीले पनि स्थान पाउनेछन्। एउटै बाटो साझेदारीमा प्रयोग गरिनेछ।
अब महानगरले बनाउन लागेको लेन 'डेडिकेटेड' हो अर्थात् साइकल मात्र चलाउन पाइने। यो ‍फुटपाथ र मुख्य सडकका बीचमा साइकल यात्रीका लागि मात्रै हुने बस्नेतले जानकारी दिए।
'अन्य सवारीले समस्या ल्याए कारबाहीको नियम पनि ल्याउँछौं,' उनले भने।
यता ललितपुर महानगरले पनि साइकल लेन मिच्नेलाई जरिवाना वा कारबाही गर्ने तयारी गर्दैछ।
काठमाडौंका सडकमा साइकल लेन बनेका भए पनि ‍प्राविधिक समस्या देखिएपछि योजना आयोगले भइरहेको लेनलाई नै 'रिडिजाइन' गर्न खोजेको बस्नेतले बताए।
'पहिले बनाइएको लेनमा कंक्रिट ब्ले‍क प्रयोग गरिएको छ। जुन साइकलका लागि उपयुक्त हुँदैन। साइनबोर्ड नहुनु, र्‍याम्प नभएकाले निर्वाध गुडाउन नसक्नु, यात्रुलाई जानकारी नहुनु जस्ता त्रुटि रहेछन्,' उनले समस्या औंल्याए, 'अब यी कुरा सुधार गरिन्छ।'
नेपाल साइकल सोसाइटी, स्कुल अफ आर्ट र जर्मनका साइकल अभियन्ता इरिक हकम्यानले गरेको साइकल यात्रा अध्ययनले पनि यस्तै देखाएको छ- बीचबीचमा ओर्लेर हिँड्नुपर्ने, उवडखावड बाटो, साइकल लेनमा पैदलयात्रु त कहिलेकाहीँ मोटरसाइकलै पनि हुँइकिने जस्ता समस्याले आजित साइकलचालक बरू ठूला सवारीको घन्चमन्च छिचोलेर हिँड्न सहज मान्छन्।
काठमाडौंमा साइकल यात्रा सम्बन्धी अन्तरक्रियामा प्रस्तुत कार्यपत्रले माइतीघर-तीनकुने सडकमा प्रतिघण्टा ४६ जना साइकल यात्री पास हुने गरेको देखाएको छ। त्यस्तै ८१ प्रतिशत साइकल प्रयोगकर्तालाई भइरहेको साइकल लेनबारे थाहा नै नभएको पाइयो।
अध्ययनमा सहभागी १५ जनाले समथर लेन, संकेत, चिन्ह, पार्किङे व्यवस्था, सडक बत्ती हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
उपाध्यक्ष बस्नेतले भने, 'रिडिजाइन गरिएको लेनमा यस्ता समस्या आउन नदिन सचेत छौं।'
लेनका लागि आगामी सातादेखि टेन्डर प्रक्रियामा जाने र माघबाट काम सुरू गर्ने महानगरले जानकारी दिएको छ। साथै लेनबारे जानकारी दिन हरेक शनिबार र्‍याली पनि ‍गरिनेछ।
साथी र अरू मान्छेलाई पनि साइकलमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै बस्नेत अनुरोध गर्छन्, 'सकिन्छ सधैं साइकल चलाऔं, सकिँदैन अन्य चालकको मनोबल बढाउन भने पनि हप्तामा एक दिन साइकल यात्रामा निस्कऔं।'
लेन निर्माणको पहिलो चरणमा दुवैतर्फ लेनमा राखिएको कंक्रिट ब्लक उप्काइनेछ। अन्य सवारीले हस्तक्षप गर्न नसक्ने गरी कालोपत्रे गरिने छ। यसरी दुईतिर पाँच किलोमिटर साइकल लेन नयाँ डिजाइनमा तयार हुनेछ। यसका लागि महानगरले तीन करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको छ।
यति धेरै सडक सञ्जाल भएको ठाउँमा भइरहेको जम्मा पाँच किलोमिटर लेन व्यवस्थित गर्दा साइकल प्रवर्द्धन होला त?
'यो हाम्रो पाइलट प्रोजेक्ट हो। प्रभावकारिता हेरेर साइकल लेनलाई नेटवर्किङ गर्ने पनि सोच छ,' साइकल लेनबारे थप योजना सुनाउँछन् बस्नेत, 'हुनसक्छ पाँच वर्षपछि ३०/३५ किलोमिटरसम्म निर्वाध साइकल सवार गर्न पाइयोस्।'
महानगरको साइकल सम्बन्धी अर्को योजना पनि छ। लेन बनिसकेपछि भाडामा समेत साइकल चलाउन सकिने। पोखरालगायत सहरमा यस्तो प्रयोग भइसकेको छ। यसका लागि भने पहिले भरपर्दो लेन बन्नु जरुरी छ।
'सार्वजनिक बसमा तिनकुनेसम्म आइपुगेर तपाईंलाई साइकल चढ्न मन लाग्यो भने के गर्ने?,' बस्नेत योजना सुनाउँछन्, 'साइकल भाडामा लिएर माइतीघर वा अर्को स्टेसनमा राख्न सकियो भने त सजिलो भयो नि।'
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २६, २०७६, ०४:०४:००